Mba hamahana ny filan'ny mpanjifa ny vokatra dia nanangana ekipa manokana ny orinasa. Noho izany, afaka manome toky ny mpanjifa izahay:
Manome tolotra manokana ho an'ny iray izahay mba hanomezana fahafaham-po ny mpividy.
Hamaly ny fanontanian'ny mpanjifa ao anatin'ny fotoana fohy izahay, mba hahafahan'ny mpanjifa miala sasatra.
Samy nanao sonia fifanarahana tsiambaratelo izahay mba hiantohana ny fiarovana ny tetikasa.
Wireless famandrihana haingana teknolojia
Teknolojia famandrihana haingana PD
Teknolojia fampivoarana fanamboarana vokatra vita amin'ny composite
30 MM vahaolana fiampangana tsy misy tariby lavitra ho an'ny fanaka
Ahoana no hanomezana toky ny mpanjifa?
Ny ekipan'ny Lantaisi dia mikatsaka hatrany ny vokatra avo lenta, tsy misy kilema, azo antoka ary miaro ny tontolo iainana. Manolotra fanohanana malefaka, vokatra mahafeno fepetra, vidiny mirary ary serivisy avo lenta izahay mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Ny fanomezan-toky ny mpanjifa no filozofianay momba ny fandraharahana, noho izany dia manana fanaraha-maso hentitra ny kalitaon'ny vokatra izahay. Mba hahatratrarana ny tanjona amin'ny fanaraha-maso ny kalitao dia manana departemanta fanaraha-maso kalitao feno izahay.
DQE (Injeniera momba ny kalitao)
Ny DQE dia miantoka fa ny valin'ny famolavolana dia mahafeno ny filan'ny mpanjifa, ary mitantana mafy ny fanadihadiana, ny fanodinana, ny fitsarana, ny fanapahan-kevitra ary ny fanitsiana ny dingana ara-teknika manontolo amin'ny famolavolana. Ohatra: Amin'ny fanaraha-maso ny kalitao mialoha sy ny fandrindrana ny vokatra vaovao, ny DQE dia tsy maintsy tompon'andraikitra amin'ny famokarana santionany amin'ny famolavolana, ny fomba fitsapana ary ny famokarana vokatra vaovao, ary tsy maintsy manao fitiliana fanamafisana marobe mba hanamarinana raha mifanaraka ny vokatra vokarina. ny fepetra takian'ny mpanjifa ary Na afa-po amin'ny fampiharana izany, mamakafaka ary mamaha ny olana rehetra misy eo amin'ny fizotran'ny famokarana.
SQE (Injeniera momba ny kalitaon'ny mpamatsy)
Ny SQE dia manara-maso ny kalitaon'ny akora omen'ny mpamatsy, manomboka amin'ny fanaraha-maso mandeha mankany amin'ny fanaraha-maso mavitrika, mandroso ny fanaraha-maso ny kalitao, mametraka ny olana momba ny kalitao eo amin'ny toerana voalohany, mampihena ny vidin'ny kalitao, mahatsapa ny fanaraha-maso mahomby, ary manao santionany ny mpamatsy mandray anjara amin'ny famatsiana Tombanana sy omeo hevitra voafantina .
PQE (Injeniera momba ny kalitaon'ny vokatra)
Araka ny fepetra takian'ny tetikasa, ny PQE dia manao famerenana ny angon-drakitra ho an'ny fikarohana sy fampivoarana vokatra vaovao ary manome tatitra PFMEA. Izy ihany koa no tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso sy ny famakafakana ny PQC (fifehezana ny kalitaon'ny process), ny FQC (ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra vita), ny OQC (ny fanaraha-maso ny kalitao mivoaka) ary ny dingana hafa, manondro ny banga sy ny fikarakarana azy ireo ara-potoana.
CQE (Injeniera momba ny kalitaon'ny mpanjifa)
CQE no tompon'andraikitra amin'ny fivarotana ny vokatra. Hijoro ao ambadiky ny mpanjifanay foana izahay, manara-maso sy mitatitra tsy tapaka, mamakafaka ny fitsipiky ny kalitaon'ny vokatra, mamolavola fenitra azo atao sy fomba fatra, ary manome fepetra fisorohana sy fanitsiana.